ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ဖြူစင်တဲ့ငွေလမင်းပိုင်ရှင်
့် ကျနော်တို့တွေ အရမ်းလေးစားကြသလဲ?
မနေ့ က အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့ပါပြီ .. ယခုလည်း ဒီမိုကရေစီ လမ်းမပေါ်ကိုိ ရောက်နေပါပြီ မနက်ဖြန်ဆိုတာတွေးရခက်ပါသည် ဒီမိုကရေစီခေတ် လို့ ပြောလို့ မရသေးပါ. အမှန်တော့ ဒီမိုကရေစီ လည်းမရသေး ပါ ။ ဒီမိုကရေစီခေတ်ဆိုသည်မှာလွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောစည်းရုံးခွင့် စသည်ဖြင့် ရှိနေရပါမည်။ ယခင် ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ယခုတော့ သင့်ပါတယ်ဟုခေါ်ရမလိုပါဘဲ။ယခုတော့နိုင်ငံရေးကို ပါးနပ်လိမ္မာစွာ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းကျကျ ပြုလုပ်ရတော့မည်ဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့်အမေစုကို ပြည်သူတွေက မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်ကာချစ်ခင်အားကိုး မြတ်နိုးကြခြင်းသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။အခု အိန္ဒိယမှာလည်း အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။မြန်မာပြည်မြေပြင်ပေါ်မှာ လူသားများထဲတွင် စွန့် လွှတ်ခြင်း အနစ်နာခံခြင်း`သတ္တိ´နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုကို တုနှိုင်းမရအောင်
လူသားအားလုံးရဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုကို ကိုင်စွဲထားနိုင်တဲ့သူ..ပြီးတော့ ဖြူစင်တဲ့ငွေလမင်းပိုင်ရှင် လို့ဒီအတိုင်းဘဲ ရေးလိုက်မိပါတယ် ..။